Madaxweyne Biixi Oo Sheegay In Xisbiyadda Siyaasadda Somaliland Ay Ka Leexdeen Nidaamkii Loo Aasaasay | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Madaxweyne Biixi Oo Sheegay In Xisbiyadda Siyaasadda Somaliland Ay Ka Leexdeen Nidaamkii Loo Aasaasay
Hargaysa (SDWO): Madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi, ayaa sheegay in xisbiyadda siyaasadda Somaliland ay ka leexdeen dariiqii loogu tallo galay in u dhaqmaan ayna hadda u muuqdaan kuwo ay reero leeyihiin.
Waxaanu eedda arrintaasi dusha u saaray bulshadda reer Somaliland oo uu ku dhaliilay in ay nidaamkii dimoqraadiyadda iyo siyaasadda ku dhex mileen qabyaalad, isla markaana ay taasi sababtay in xisbiyadu ka leexdeen habkii loo sameeyay.
Madaxweyne Biixi, waxa uu sidan ku sheegay waraysi dheer oo uu la yeeshay weriye C/salaam Ibraahim Hereri, oo ka tirsan telefishanka UNIVERSAL. Waraysigaasi ayuu madaxweynuhu kaga hadlay abaaraha soo noq noqday iyo sidii looga gaashaaman lahaa, in wax laga bedello qaabka aynu xoolaha nool u dhaqano, in bulshadda la barro sida looga shaqaysto Baddaha.
Sidoo kale waxa uu Muuse Biixi, ka hadlay sababta uu xukuumadiisa iyo golaha wasiirradaba ugu soo daray tiro badan oo dhalinyarro ah, isla markaana uu uga tegay rag aqoon yahamiin ahaa oo la filayay in uu wasiirro ka dhigo iyo arrimo kaloo fara badan.
Halkan Hoose Ka Daawo Waraysigaasi: